Samachar Batika || News from Nepal » किन महिलाहरुले आफ्नो उमेर कम बताउछन् ?
किन महिलाहरुले आफ्नो उमेर कम बताउछन् ?
यदि तपाईले महिलाको उमेर सोध्नुभयो भने अधिकाँशले सहि बताउँदैनन् । अथवा तपाइँले कुनै महिलाको उमेर सोध्नु भो भने कहिलेकाँहि त स’म्बन्ध नै ध’रापमा पानै स’म्भावना हुनसक्छ । हो महिलाहरले आफ्।नो सहि उमेर भन्न रुचाउँदैनन् । भनिहाल्यो भने पनि अधिकांश महिलाले उमेर घटाएर भन्ने गर्छन् । उमेरको विषयमा महिलाहरुले गलत धारणा राख्ने हालै गरिएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
डेली एक्सप्रेसमा प्रकाशित उक्त अध्यनका अनुसार महिलाहरुलाई उमेर बारे भ्र’म हुन्छ । महिलाको मनोविज्ञानमाथि अ’नुसन्धान गरेको उक्त अ’नुसन्धानले ४५ वर्ष नका’ट्दा सम्म महिलाहरुलाई आफ्नो साविक उमेर भन्दा ५ वर्ष कम लाग्ने गरेको बताए । ल्यानकम एडभान्स जेनेफिकले गरेको महिला मनोविज्ञानमाथिको शोधमा महिलाहरुले आफू धेरै उमेरसम्म जवान हुन पाउनु पर्ने नैसगिर्क अधिकार नै भएको समेत ठान्ने महिलाहरुको स्वभाव हो ।
शोधमा सहभागी भएका करिव ३३ प्रतिशत महिलाले त्वचाका कारण आफू जवान देखिने दावी गरेका थिए । त्यसैगरी कतिपयले त आफू उमेर भन्दा १० वर्ष कान्छी देखिने दावी समेत गरेका थिए । अनुसन्धानले महिलाहरुमा उमेरबारे भ्र’मात्मक धारणा गहिरोगरी रहेको र यसलाई बदल्न क’ठिन रहेको बताइन् । नेपाली हेडलाईन्स बाट ।
हालै गरिएको एक अध्यनले मानिसको खुसीको विषयमा अनौठो तथ्य बाहिर ल्याएको छ । लान्सेट जर्नलमा प्रकाशित शोधमा अधिकाँश मानिसहरु ४० वर्ष पछि खुशी हुन छोड्ने उल्लेख छ । तर खुसीको मात्रा कति कम हुने मात्रा भने फरक फरक हुने शोधकर्ताहरुको भनाइ छ । शोधकर्ताहरुले अमेरिका र बेलायत जस्ता देशमा बस्ने ब्यक्तिहरु ३५ वर्ष कटेपछि निक्कै दुःखी हुन्छन् ।
३५ देखि ५५ वर्ष सम्म निक्कै दुःखी हुनेहरु पनि त्यसपछी भने धेरै दुःखी नहुने उनीहरुको भनाइ छ । शोधका अनुसार आफ्रिकामा अधिकाँश मानिसहरु कहिल्यै पनि खुसी हुने तर पूर्वी युरोप, रुस र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरुमा बढ्दो उमेरसँगै मानिसहरुको खुशी कम हुने देखिएको छ ।
यस्को कारण के
युनिवर्सिटी कलेज लण्डनका प्रोफेसर एण्ड्र्यु स्टेप्टो भन्छन् ‘उमेर बढ्दै जाँदा मानिसको खुशीको मात्रा घट्दै जान्छ’ । शोधकर्ताहरुले १६० देशमा ४ सय वर्ष सम्मका तथ्याङ्कमा आधारित रहेर यो अध्यन गरेका थिए । शोधमा सहभागी अमेरिकाको प्रिन्सटन युनिवर्सिटीका एङ्गस डीटन भन्छन् आर्थिक अवस्था यो कुरासँग जोडिएको छ ।
२५ देखि ३५ वर्षको उमेरमा मानिस सबैभन्दा खुसी हुने शोधको निष्कर्ष छ । यो उमेरमा जागिर देखि तलव सुविधाका कुराले पनि मानिसमा बढी खुशी हुने तर उमेर घर्किँदै जाँदा यस्तो कुराको चिन्ता बढ्ने भएका कारण ४० देखि ५५ सम्म मानिस सबैभन्दा दुःखी हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
प्रकाशित मिति ३१ बैशाख २०७७, बुधबार १६:०२